Pisces | Eyekhala 2022
IiPisces kunye neSagittarius
I-Sagittarius kunye neePisces zombini zilawulwa nguJupiter, kwaye ubudlelwane babo bugcwele ithemba, ukuhleka kunye nothando olwabelanayo lwehlabathi kunye nabantu abakulo. Ukuba baza kuhlala ixesha elide, kufuneka bakuhlonele ukwahluka kwabo.
IiPisces kunye neScorpio
I-Scorpio kunye neePisces zinokwenza isibini esihle kakhulu ukuba abapheli ukudlala indima yezinto ezichaseneyo. Baya kuqondana ngamagama ambalwa kakhulu kwaye uthando lwabo lunokuhlala ngonaphakade ukuba bafikelela kubunzulu beemvakalelo ngokwaneleyo.
NgoFebruwari 23rd Zodiac
Umntu ozelwe ngomhla wama-23 kuFebruwari uchitha ubomi bakhe ekhangela izigwebo kunye nesigwebo sokuziphatha ukuze abakhulule kumaqhina exesha elidlulileyo.
NgoMatshi 18th Zodiac
Amandla kunye nokugxila kunamandla kumntu ozelwe nge-18 kaMatshi, kwaye idabi labo limele lilwe de baqonde apho ukukholelwa kwabo kufuneka kuthathe khona.
NgoFebruwari 24th Zodiac
Ngomhla wama-24 kaFebruwari uthwala ubunzima bokulahlekelwa kunye nemigama emikhulu, kwaye imiphefumlo ezelwe ngeli xesha inenkathazo yeyiphi na indlu.
NgoFebruwari 25th Zodiac
Ingqondo kunye neyomoya kufuneka idibanise kwihlabathi labo bazalwa nge-25 kaFebruwari, ukubenza baqalise umsebenzi wabo wothando.
Nge-3 kaMatshi Zodiac
Abantu abazalwa ngomhla wesi-3 kuMatshi babonakala beleqa umsebenzi wabo, kwaye bayaqonda ukuba ulwazi kuphela kwento enokukhanyisa indlela yabo.
NgoMatshi 7 Zodiac
Ukukhokelwa lilizwi leNdalo yonke, abo bantu bakhethekileyo bazalwa ngo-Matshi 7 bavame ukubona ihlabathi ngokukhanya okwahlukileyo kunabo bonke abantu.
NgoMatshi 1st Zodiac
Umntu ozelwe nge-1 kaMatshi unomsebenzi wokutyhila inyani yendalo yonke edibanisa zonke iinxalenye zepuzzle yobomi zibe yinto enye.
NgoFebruwari 21 Zodiac
Ummeli wePisces osoloko ezama ukuba nengqiqo, umntu ozelwe ngomhla we-21 kaFebruwari kufuneka afumane indlela yokubonakalisa iimvakalelo endaweni yoko.
NgoMatshi 8 Zodiac
Wonke umntu ozelwe ngo-Matshi 8 unebali elikhethekileyo loloyiso oluzayo ukuxelela, ukulwa neenkolelo zabo ukufikelela kwimeko yokwamkelwa kunye nothando.
NgoFebruwari 20 Zodiac
Umntu ozelwe nge-20 kaFebruwari kufuneka amkele ubumnyama ngaphakathi, efunda ukuba iindlela ezikhokelela kwindawo engaziwayo lelona thuba labo lokufumana uthando.
Umfazi wePisces akaqikeleleki, unovelwano kwaye uhlala engaqhelekanga. Unokuba nengxaki yokungena, kodwa ubonakala enxibe isidima somntu olahliweyo kunye noncumo olukhulu.
NgoFebruwari 26th Zodiac
Ukuhamba ngokweemvakalelo kubomi balabo bazalwa ngoFebruwari 26 kufuneka ukubakhokelela ekuziqapheliseni kunye nokwakha ukuzithemba kwabo, ukuzimisela kunye nobuntu.
NgoMatshi 13th Zodiac
Kulucelomngeni kumntu ozelwe ngoMatshi 13 ukuba ahlale enikel’ ingqalelo kwinto enye ngexesha asaziyo ukuba ihlabathi lizaliswe bubutyebi obunokufunyanwa.
NgoMatshi 21 Zodiac
Umhla apho utshintsho lwasebusika luye entwasahlobo lwenzeka, nge-21 kaMatshi, luyasityebisa ngabantu abalungele ukuqala into emangalisayo.
NgoMatshi 5 Zodiac
Abo bazalwa ngo-Matshi 5 banento yokuthetha, kwaye kufuneka bafumane indlela yokubonisa inyaniso yabo yangaphakathi kunye nesethi yeenkolelo ngaphandle kokubamba.
IiPisces kunye neLibra
Ubudlelwane beLibra kunye neePisces bunokuba ngumngeni omkhulu ngenxa yokungabikho kwentlonipho phakathi kwamaqabane. Ukuba bayadlula kuyo, banokufumanisa ukuba ukukhangela kwabo okwabelwanayo ngothando lokwenyani kubakhokelela kwicala elinye.
IiPisces kunye neVirgo
Xa iVirgo kunye neqabane lePisces beqala ubudlelwane babo, banomngeni wokungalindeli imfezeko epheleleyo. Ukuba bahlala kunye ixesha elide ngokwaneleyo, banokuqonda ukuba iimvakalelo ababelana ngazo azinakufunyanwa nakubani na.
IiPisces kunye noLeo
Kolu budlelwane, uLeo uya kuhlala egqabhuza iqamza lehlabathi elibuthathaka lePisces, kwaye ukungabikho kokuthembana kunye nokhuseleko kuya kuvakala kwangoko. Elona thuba labo lilele kwindlela eyintsomi yeePisces ukuba iqabane likaLeo alifane ligqibe ekubeni libe nalo.